MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: 17 May 2009
Free DAW AUNG SAN SU KYI Now
Poster From Email
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 22.5.090COMMENTS
MYIT KYI NAR ACTION
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ 20 2009 18:50 - မြန်မာစံတော်ချိန်
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 21.5.090COMMENTS
One More Photo Of GW's Spary Actions
Please see the one more photo of our spray actions.
Action in this photo was taken near The Embassy of Japan
For further more information, Please visit our blog pages
ကျနော်တို့ Generation Wave (မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး)မှ
မေလ ၁၈ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ဘောက်ထော်မြို့နယ် မှတ်တမ်းရုံး
On May 18th, Generation Wave didagraffiti and spray paint action for the release of Daw Aung San Suu Kyi.
Actions happened at key crowded places in Yangon, Burma: near the Japanese Embassy in Bahan township,
near Military Documentation Office, and at the Football Stadium of (Bauk Htaw) Yankin Township.
We also want to encourage people and especially youth of Burma to do all they can to take actions
for the release of Daw Aung San Suu Kyi
အရှက်မရှိ အိုနာကျိုးကန်း ခွေးသူခိုး
ငါတို့ အမေကို၊ ငါတို့ အဖွားကို
၀ိုင်းကိုက်နေကြ၊ ၀ိုင်းဟောင်နေကြပြီ ။
နင် ဘာလုပ်ရမလဲ ။
တွေ မနေနဲ့၊ ထွေ မနေဲ့
လေ မနေနဲ့၊ ခွေ မနေနဲ့
သေ မနေနဲ့၊ ရှည်မနေနဲ့ ။
တိုက်ပွဲ ကတော့ ကောင်းကောင်းကြီး စပြီ
သင်္ခါရဆိုတဲ့ ပြုပြင်၊ စီရင်၊ ပြောင်းလဲခြင်း သဘောအလိုအရ
ကောင်းကောင်းကြီး ဆုံးမရမယ့် အချိန်ခါ ရောက်ခဲ့ပြီ ။
ကောင်းကောင်းကြီးကို စခဲ့ပြန်ပါပြီကော။ ။
(၁၉၊ မေ၊ ၀၀၉)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 19.5.090COMMENTS
Labels: DAW AUNG SAN SU KYI, MY POEMS, PHOTOS
YEAR 150TH MANDALAY < YEAR 100TH MANDALAY
YEAR 100TH MANDALAY
(Year 100th Mdy Source - http://www.first-11.com/bdet.php?id=20)
Year 150th Mdy Photo Album
ရတနာပုံ မြို့ တည်နန်းတည် အနှစ်(၁၅၀)ပြည့် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များ
၀င်းနောင်၊ မျိုးနန္ဒ၊ ပန်တျာဝေယံဦး ဇာတ်ပွဲ တစ်ညစီ
သစ်လွင်၊ မြတရာ၊ နှင်းသပြေအငြိမ့် တစ်ညစီ
ဒေါ်မမနိုင် ရုပ်သေး (၁၄-၁၅/မေ/၂၀၀၉)
Genius, Shells, မန်းစည်ပင်တေးဂီတ တစ်ညစီ
မော်ကွန်းရုပ်ရှင် (စတိုင်(၁၄)၊ ပန်းဒဏ္ဍာရီ(၁၅)၊ ချစ်ခြင်းဖွဲ့မေတ္တာ(၁၅)၊ ပန်းပျိုးသူတို့အလင်္ကာ(၁၆)၊
-ရှေ့ ဝင်း၊ နောက်ဝင်းခင်း၍ ထွက်တော်မူ အခမ်းအနား
-မန္တလေး နှစ် (၁၅၀) ကဗျာစာအုပ်ထွက်ရှိခြင်း
-မန္တလေး နှစ် (၁၅၀) စာစု/ဆောင်းပါးစာအုပ်ထွက်ရှိခြင်း
-မန္တလေး နှစ် (၁၅၀) မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ထွက်ရှိခြင်း
(မဂ္ဂဇင်းကို မန္တလေးအသင်း (ရန်ကုန်)မှ ဦးစီးထုတ်ဝေသည်။ အယ်ဒီတာချုပ်- မောင်တင်သစ်)
-မန္တလေး နှစ် (၁၅၀) အတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ စာမျက်နှာ(+အင်တာနက်/ပုံနှိပ်)များတွင်
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 17.5.090COMMENTS
"POEM for May 18, 2009" by Aung Way
"၂၀၀၉ မေလ(၁၈)ရက်နေ့နံနက်
အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ရှေ့ တွင်
မြန်မာ ပြည်သူများ စုဝေး ရွတ်ဆိုရန်
မတရားတဲ့ ဥပဒေ (အလိုမရှိ)၂
မတရားတဲ့ အစိုးရ (ကျဆုံးပါစေ)၂
အင်းစိန်ထောင်ကြီး ဘယ့် နှယ်ဝိုင်းမယ် (ဒိနှယ်ဝိုင်းမယ်)၂
အင်းစိန်ထောင်ကြီး ကျယ်တယ်ဆို (ထပ်ချဲ့ လိုက်)၂
အင်းစိန်ထောင်ကြီး ဘယ်သူ့ အတွက် (သန်းရွှေအတွက်)၂
သန်းရွှေ သန်းရွှေ (အို့အို့ )၂
သန်းရွှေ သန်းရွှေ (နုတ်ထွက်ပေး)၂
နအဖဖွဲ့ စည်းပုံဥပဒေ (ဖျက်သိမ်းပစ်)၂
(Poem and Aung Way Photo Source - http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4078&Itemid=1)
(Insein Prison Photo Source - http://googlesightseeing.com/maps?p=&c=&t=k&hl=en&ll=16.892715,96.098034&z=16)
Labels: DAW AUNG SAN SU KYI, OTHERS' POEMS